Ciidanka Kenya oo isaga baxay degaan muhiim ah
March 19, 2019 March 19, 2019 warsame
Waxaa lagu soo waramayaa in Ciidamada Dowladda Kenya ee qeybta ka howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ay isaga baxeen Degaanka Buzaar rr Gobolka Gedo.
Saakay waaberigii hore ayee ciidamada Kenya isaga baxeen degaankaas oo mudo dhowr sano ah ay ku sugnaayeen.
Dadka deegaanka ayaa waxaa ay sheegeen in kaliya ay saakay arkeen Ciidamada Kenya oo isaga baxaya Saldhigyadii ay ku lahayeen deegaanka Buusaar, kuwaas oo aaday dhinaca degmada Ceelwaaq ee isla Gobolka Gedo.
Saraakiisha Ciidamada Kenya weli mashaacin sababaha ay deegaankaas uga baxeen, hayeeshee waxaa xusid mudan in Ciidamada Kenya 2-dii Bishaan Maarso ay isaga baxeen deegaanka Faafax dhuun,isla markaana ay la wareegeen Al-Shabaab.
Maamulka deegaanka Buusaar ayaa horay u sheegay in Ciidamada Kenya ay dhawaan ka bixi doonaan deegaankaas, hayeeshee aysan faah faahin ka bixin sababta ka dambeysa,waxaana jira in deegaano kale ay qorsheynayaan inay ka baxaan Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah AMISOM.
← DAAWO:- Gabar Kale oo Jaceyl Dartiis U Sameysay Arin Yaab leh iyo sameeyn ay ku yeelayay …
warar hada soo dhacay/
Ciidanka Kenya oo isaga baxay degaan muhiim ah March 19, 2019
DAAWO:- Gabar Kale oo Jaceyl Dartiis U Sameysay Arin Yaab leh iyo sameeyn ay ku yeelayay … October 17, 2018
DAAWO :- laba sheey oo adan ogeeyn iyo Sameeyn ay ku leeyihiin Dareenka Xubinka Taranka. October 13, 2018
Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u ambabaxay Sudan August 5, 2018
Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia oo ka hadlay qoondada Soomaalida ku leeyihiin Shidaalka Ethiopia August 3, 2018
Shabakadda Marca Oo Soo Saartay Liiska Ciyaartoyda Ay Doonayaan Kooxaha Qaaradda Yurub Ugu Waaweyn. August 2, 2018
Waa kuwee Dadka kuwa ugu Quruxda badan? August 2, 2018
Jabuuti oo ku gacan seyrtey go’aan ay maxkamad ku taal London ka gaartay dacwada DPW August 2, 2018